Global Voices teny Malagasy » Kaokazy : fampivoarana ny fiainana ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Avrily 2010 7:19 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Candy
Sokajy: Armenia, Azerbaijan, Zeorzia, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta
Na dia mbola mihisatra  aza ny fidiran’ny internet any Atsimon'ny Kaokazy, ny fambara rehetra dia maneho fa ireo haino aman-jerim-baovao sy ara-sosialy dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny fampivelarana ny demokrasia sy ny hafanam-po any an-toerana. Miaraka amin'izany fijery izany ao an-tsaina, ny Open Society Georgia Foundation  (OSGF), ny Georgian Institute of Public Affairs  (GIPA) sy ireo mpanome tànana hafa dia nikarakara ny Fihaonana voalohany ho an'ny Fanavaozana ara-Sosialy  ao Tbilissi, any Georgie ny 8-10 Aprily, hetsika izay hokarakaraina midanindran-dàlana amin'ny fihaonambe momba ny Haino aman-jery ara-Sosialy ho an’ny Fanovana Sosialy .
Hitodika amin'ny famahàna ireo olana ara-sosialy amin'ny fomba vaovao ny Fihaonana momba ny fanavaozana ara-sosialy – amin'ny fanangonana ireo soso-kevitra sy ireo fitaovana raitra mba hitondràna fanavaozana amin'ny aterineto ao anatinn'ny 48 ora monja.
Hahitàna mpandray anjara 40 ny Fihaonana voalohany momba ny Fanavaozana ara-tSosialy any Kaokazy- mpandravaka, mpandraharaha, manam-pahaizana ara-sosialy, mpandraharaha ara-barotra, mpanao lalàna, mpanao dokam-barotra avy any Georgia, Azerbaijan ary Armenia no hiara-hiasa hikaroka hevitra iray mety ho fanaingàna ara-tsosialy afaka hitondra fanovàna sy hifaninana hahazo fankasitrahana.
Ireo mpikarakara any an-toerana ny Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tsosialy any Kaokazy , ilay mpanoratra ao amin'ny Global Voices Anna Keshelashvili  any Georgia, ilay mpandrindra Onnik Krikorian  any Armenia avy ao amin'ny Global Voices, ary Emin Huseynzade avy ao amin'ny Transitions Online's any Azerbaijan, dia nanaparitaka ity hetsika ity nandritra ny iray volana ka nahasarika mpandray anjara folo avy amin'ireo firenena telo ireo. Think from A to Z. dia nanazava amin'ny ankapobeny ny hevitra  ambadiky ny Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tSosialy any Kaokazy .
Iray amin'ireo endrika (tsy fivoriana) Barcamp ny SICamp. Nahoana no tsy fivoriana ny Barcamp? Satria izy tsy manana ireo lalàna hentitra toa ny fivoriana. Matetika ireo olona ao amin'ny Barcamp no mizara vaovao. Tsy mitady tombony. Mizara fotsiny izay fantatrao. Dia mifandray amin'ireo olona vaovao.
Somary miavaka ny SIcamp. Iray amin'izany ny tsy nahazoan'ny Barcamp vokatra. Fizaram-baovao fotsiny. Ny tanjon’ny SIcamp dia ny fanànana tetik'asa vonona any amin'ny faran'ny hetsika. Aoriana fihaonana SICamp iraisam-pirenena roa dia azo antoka fa AFAKA manatanteraka tetik'asa ao anatina roa na telo andro isika.
Misy horonantsary fohifohy koa azo jerena amin'ny aterineto .
This is Tbilisi Calling dia faly manokana fa mahery fo Armeniana iray mpiaro tontolo iainana  no mpandresy tamin'ny Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tSosialy.
Tsy fahita matetika ny vaovao tsara aty amin'ny faritra Kaokazy, ka raha misy izany dia ankalazainy aoka izany. Tamin’ny taona lasa, ilay mahery fo Armeniana mpiaro ny tontolo iainana Mariam Shubudyan dia saika nahazo sazy dimy taona an-tranomaizina noho ny fanelezana “honohono” tamin'ny fanambaràna ny fanararaotana tao amin'ny akanin-jaza iray. Nesorina ihany ny fitoriana herinandro vitsivitsy lasa izay, ary tany amina fivoaran-javatra iray hafa, i Shukudam sy ny mpiara-miasa taminy no nahazo ny loka voalohany tamin’ny Fihaonana ho an'ny Fanovàna ara-tsosialy tany Tbilisi tamin’ny herinandro farany lasa teo, niaraka tamin'ny tetik'asany momba ny fiadiana amin'ny fanimbàna ny ala.
Mandritra izany, tao amin’ny Fivorian'ny Haino aman-jery ara-tSosialy ho an'ny fanovàna ara-tsosialy, ny mpandrindra isam-paritra Onnik Krikorian ao amin'ny Global Voices any Kaokazy dia mbola nanolotra indray, niaraka tamin'ny mpitoraka blaogy Azerbaijani Arzu Geybullayeva, ny andraikitry ny haino aman-jery sosialy amin'ny fiovaovan'ny fifanolanana. Ireo sary, miaraka amin'ny an'ilay mpandresy Shukudyan, dia azo jerena  ao amin'ny blaogin'ny Frontline Club.
Fanolorana ny Haino aman-jery sosialy ho an'ny Fanovàna ara-tsosialy any Tbilisi 
Jereo ny fanampin'ny fanolorana  ao amin'ny Oneworld Multimedia .
Arovy ny Ala 
Jereo ny fanampin'ny fanolorana  ao amin'ny SICAMP Caucasus .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/04/26/5770/
 mbola mihisatra: http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/details.cfm?lng=en&id=115031
 Fihaonana voalohany ho an'ny Fanavaozana ara-Sosialy: http://www.sicamp.org/
 Haino aman-jery ara-Sosialy ho an’ny Fanovana Sosialy: https://sites.google.com/a/ph-int.org/socialmedia2010/
 Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tsosialy any Kaokazy: http://sic-caucasus.net/
 nanazava amin'ny ankapobeny ny hevitra: http://azthink.blogspot.com/2010/04/social-innovation-camp-caucasus.html
 azo jerena amin'ny aterineto: http://sic-caucasus.net/some-serious-documentary-about-si-camp-caucasus/
 mahery fo Armeniana iray mpiaro tontolo iainana: http://caucasusreports.blogspot.com/2010/04/whistleblower-wins-again.html
 azo jerena: http://frontlineclub.com/blogs/onnikkrikorian/2010/04/social-media-for-social-change-comes-to-the-caucasus.html
 Fanolorana ny Haino aman-jery sosialy ho an'ny Fanovàna ara-tsosialy any Tbilisi: http://www.slideshare.net/onewmphoto/smsc-presentation
 Arovy ny Ala: http://www.slideshare.net/sicampc/save-the-trees